Ingabe i-3F ingumkhiqizi wangempela?
Yebo, i-3F iyimboni yobungcweti yemikhiqizo yezintambo, ikhebula kanye nocingo kusukela ngo-1993.
Yiziphi izimakethe ezisekelwa yi-3F?
I-3F isekela izidingo zokuthengiswa kwama-OEM kanye nama-Sub- Assemblers emhlabeni jikelele ngaphakathi kwezimakethe ezilandelayo ；
• I-Aerospace nokuVikela
• Izithuthi & umkhumbi
• Izisetshenziswa Zikagesi
• Izinsiza Zokwelapha
• Ithuluzi likagesi
• Ikhompyutha Peripheral
• Ikhaya Elihlakaniphile
• IKhabhinethi yokuguqula nokulawula
Ngabe i-3F ithumela emhlabeni wonke?
Yebo, i-3F inikezela ngezixazululo zokuphatha izintambo, ikhebula nezintambo ezinkulungwaneni zezinkampani emhlabeni jikelele, enendawo yokugcina impahla yaphesheya nasehhovisi e-USA, Thailand nase-HK, futhi futhi ingaletha noma ikuphi kusuka e-China head factory.
Ngabe isitifiketi se-3F ISO siqinisekisiwe?
Yebo, i-3F ithola isitifiketi se-ISO kusukela ngo-2001, sihlala sigcina ikhwalithi kuqala phakathi nentuthuko. ngasikhathi sinye, sinesitifiketi sokulawulwa kwekhwalithi se-QC080000 ne-IATF16949.
Ngabe i-3F UL / CSA iqinisekisiwe?
Yebo, yonke imikhiqizo ye-3F inesitifiketi, hhayi i-UL / CSA kuphela kepha ne-VDE ne-JET ukuze ifanele imakethe namakhasimende ahlukile.
Ngabe i-3F ihlinzeka ngezinto ze-ROHS / REACH?
Yebo, i-3F ithwala imikhiqizo ye-ROHS / REACH ehambisanayo nemikhiqizo yekhebula noma nini lapho itholakala.
Uhlobo luni lwemikhiqizo olunikezwa yi-3F?
I-3F inikezela ngezixazululo zokuphatha izintambo, ikhebula nezintambo kufaka phakathi:
• Intambo nentambo
• I-UL & CSA & VDE & JET Lead Wire
• Intambo Yezimoto
• Intambo yocingo lwasolwandle nesikebhe
• I-Mil- Spec ne-Aerospace
• Intambo ye-elekthronikhi
• Okukhethekile nentambo yangokwezifiso noma amahhanisi entambo
• Ukushisa ucingo
• Izibopho zentambo zenayiloni
• Ishubhu linciphisa ukushisa
• Ishubhu le-PVC
• Ishubhu le-fiberglass
• Ishubhu lesilicone
• Ishubhu le-Teflon
• Ishubhu lenayiloni
Ingabe i-3F iyalunikeza ucingo lwentambo nekhebula?
Yebo, i-3F yonke intambo yekhebula nekhebula ayinethusi elingenalutho, ithusi elithinini, ithusi elihlanganiswe ngesiliva noma ithusi eliqoshwe ngeNickel.
Ingabe i-3F ikunikeza ngezifiso insizakalo yokubophela izintambo?
Yebo, i-3F inomnyango wokuhlanganisa izintambo iminyaka eminingi, ama-pls athumela imidwebo noma amasampula wokuklama ukuhlola intengo.
Kungenzeka ukuvakashela ifektri ye-3F bese ukhiqiza umugqa ngaphambi kwe-oda?
Yebo, wamukelekile ukusivakashela nganoma yisiphi isikhathi, uma ungenaso isikhathi, futhi ungahlela ikholi yevidiyo nathi ukuhlola.
Ngiwufaka kanjani umyalo nge-3F?
Thumela isicelo sakho se-oda nge-imeyili ku Jackie@qifurui.com noma usishayele + 86-18824232105 phakathi kuka-7: 30 AM-23PM (isikhathi saseChina).
Kungenzeka yini uku-oda online?
Yebo, ama-pls athumela uphenyo ku-alibaba websit www.qifurui.en.alibaba.com , singenza i-oda lokuqinisekisa ukuhweba ngawe.
Ingabe kukhona ubuncane be-oda?
Yebo, i-3F inezinhlobo eziningi zocingo nosayizi esitokweni ngaso sonke isikhathi, ama-pls aqinisekisa nathi ukuthi yiluphi uhlobo lwentambo nosayizi nombala owudingayo, sizohlola isitoko sakho nge-asap.
Kungenzeka yini ukuthola amasampula wamahhala ngaphambi kwe-oda?
Yebo, wamukelekile ukucela amasampula wamahhala. Singanikela ngamasampuli wamahhala angaphansi kwama-50m uma kukhona esitokweni, uma kunesidingo sokukhiqiza amasampula, lapho-ke sidinga ukukhokhela izindleko ezithile zesisebenzi, futhi sizonciphisa lezi zindleko ngokuzayo. amasampula ukulethwa izindleko ngasohlangothini lwakho futhi. Ukulethwa kwamahhala kukheli laseChina.